Izikrini ezihamba phambili ze-LCD ze-Arduino | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Izikrini ze-LCD ne-Arduino
Amaphrojekthi ahlobene ne-Arduino athandwa kakhulu futhi, njengoba kwenzekile nge-Raspberry Pi, ingenye yamaphrojekthi we-Free Hardware asetshenziswa kakhulu phakathi kwezinkampani. Yingakho sizokhuluma ngakho enye yezinhlanganisela ezithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi be-Arduino: I-LCD + Arduino.
Isibonisi se-LCD siyisesekeli esandayo sokonga futhi esifinyelelekayo, okwenza kube inketho enhle yokuhamba nebhodi lethu le-Arduino. Kepha Ngabe isikrini se-LCD singasetshenziswa nebhodi yethu ye-Arduino? Yimaphi amaphrojekthi angasetshenziswa nge-LCD ne-Arduino, ingabe le nhlanganisela kufanele isetshenziswe?
1 Iyini i-LCD?
2 Yiziphi izinhlobo zezikrini ze-LCD ezikhona?
3 Yiziphi izinhlobo ezithandwa kakhulu?
3.1 INokia 5110 LCD
3.2 IHitachi HD44780 LCD
3.3 I-I2C OLED LCD
3.4 I-E-Ink LCD
4 Ungaxhuma kanjani isikrini se-LCD ku-Arduino?
5 Kungakuhle yini ukusebenzisa isikrini se-LCD kuphrojekthi yethu?
Abasebenzisi be-Novice abazi ukuthi i-LCD imeleni yize bazobe beyibone kaningi esikhathini sokuphila kwabo. I-LCD imele i-Liquid Crystal Display, noma okuba yi-Liquid Crystal Display. Isikrini esincane noma esikhulu abaningi bethu esibazi kumadivayisi ahlukahlukene njengamawashi we-alamu, izikrini zewashi, ama-calculator, njll. ... Amadivayisi kagesi angapheli anwetshwa ngenxa yenhlanganisela ye-LCD + Arduino ne-Free Hardware.
Izikrini ze-LCD ziyahambisana nanoma iyiphi i-Free Hardware, kufaka phakathi amabhodi we-Arduino Project, yize zidinga ukuthi amabhodi abe nezixhumi noma izikhonkwane ezithile zokwenza ukuxhumana phakathi kwebhodi le-elekthronikhi nesikrini seLCD.
Ngaphandle kwalokho, akunasithiyo ekusebenziseni osayizi abahlukahlukene be-LCD screen. Ngamanye amagama, ibhodi elifanayo le-Arduino lingasebenzisa i-5-intshi, i-20 "LCD screen noma usayizi wezinhlamvu ongu-5 × 2, ukukhuluma ngosayizi omncane. Kepha kufanele sikuqaphele lokho Ibhodi le-Arduino alifani nekhadi lemidwebo noma i-motherboard, ngakho-ke umyalezo ozokhonjiswa esikrinini ngeke usebenze ngokufanayo esikrinini esincane njengasesikrinini esikhulu, inqobo nje uma kunebhodi elifanayo le-Arduino.
Izikhonkwane esizodinga ebhodini le-Arduino ukuxhuma esikrinini se-LCD kuzoba okulandelayo:
bheka umahluko phakathi
Izikhonkwane D0 kuye ku-D7
Izikhonkwane ezimbili ze-Backlight
Uma unezikhonkwane nezikhonkwane ezanele ezihambisana nalokhu okungenhla, I-LCD izosebenza kahle nebhodi le-Arduino. Ngakho-ke kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukubheka izikhonkwane zawo womabili amadivayisi ukuze uqiniseke ukuthi ukuxhumana kukhona. Kunoma ikuphi, kuyaqabukela ebhodini le-Arduino elingakwazi ukuxhunywa kusibonisi se-lcd futhi uma kwenzeka kuba nesimo esinjalo, kunamamojula e-lcd ahlukene emakethe axhumeke kalula ku-Arduino futhi izindleko zawo ezingabizi kakhulu.
Yiziphi izinhlobo zezikrini ze-LCD ezikhona?
Njengamanje sithola izinhlobo ezintathu zezikrini ze-LCD emakethe:
El Ulayini we-LCD wuhlobo lwesikrini olukhombisa imininingwane ngemigqa. Imininingwane ibekwe kolayini futhi asikwazi ukuphuma kulolo hlaka. Lolu hlobo lweLCD lusetshenziswa kakhulu, luyonga futhi luyaziwa kodwa futhi luhlobo lwe-LCD olunikeza ukudlala okuncane, ngoba ikhombisa kuphela imininingwane ethile futhi imvamisa imibhalo kuphela.
El ichashazi lcd Isebenza cishe ngokufana nohlobo lwangaphambilini lwe-lcd, kepha ngokungafani neyangaphambilini, ku i-lcd ngamaphuzu sine-matrix yamaphoyinti. Ngakho-ke, kulolu hlobo lwe-LCD singabeka umbhalo nezithombe noma yikuphi esikrinini se-LCD. Yini enye singaba nosayizi abaningana befonti ngaphakathi kwesikrini se-LCD esifanayo, into engenzeki ekubonisweni kwe-lcd kolayini, osayizi bayo okufanele ihlale ifana njalo.
El Isibonisi se-OLED Kungenxa yabaningi uhlobo lwesibonisi sabo ngenkathi abanye kungaphakathi kwezinhlobo ze-lcd. Isibonisi se-OLED yisikrini esisikhombisa imininingwane kepha ukwakhiwa kwaso kwehlukile kokwesikrini se-LCD kusukela lapho isebenzisa ama-diode aholelekile anezinto eziphilayo ekudalweni kwawo. Ngokungafani nezinhlobo zangaphambilini, izibonisi ze-OLED zinikeza ukulungiswa okuphezulu, umbala kanye ne- ukusetshenziswa kwamandla okuphansi. Njengabaqaphi bekhompyutha noma i-dot lcd, izikrini ze-OLED zisebenzisa i-matrix yamachashazi noma amaphikseli (ngoba singasebenzisa imibala eminingana kusibonisi esifanayo) ukubonisa okuqukethwe.
El Isibonisi se-LED noma i-LCD Led siyefana nesibonisi se-OLED, kepha ama-diode aholwa aqukethe izinto eziphilayo. Ukusebenza kwayo akuphezulu njengokuboniswa kwe-OLED kepha kunikeza isixazululo esithe xaxa kunesikrini se-LCD esinamachashazi futhi sinikeza umbala.
El Ukuboniswa kwe-TFT uhlobo lwakamuva kakhulu lwe-LCD olukhona emakethe. Singasho ukuthi isibonisi se-TFT sisebenzisa amaphikseli njengama-computer monitors noma amathelevishini nokuthi singakhipha noma yiluphi uhlobo lolwazi ngalezi zikrini. Ukusetshenziswa kwayo kwamandla kukhulu kunezinye izinhlobo zangaphambilini yingakho kusetshenziswa osayizi abancane. Usayizi walezi zikhangiso ulinganiswa ngamasentimitha ngokungafani nezinye izinhlobo zokubonisa. Zilinganiswa ngezinhlamvu noma ngobubanzi besikrini.
Yiziphi izinhlobo ezithandwa kakhulu?
Ngenxa yezentengiselwano eziku-inthanethi singathola amamodeli angenakubalwa okuboniswa kwe-LCD, kepha ambalwa kuphela aziwa kakhulu. Lokhu kuthandwa kungenxa yokutholwa kwayo okulula, intengo yayo, ukusebenza kwayo noma nje ikhwalithi yayo.. Lapha sikhuluma ngalezi zinhlobo:
INokia 5110 LCD
Lokhu kuboniswa kuvela kumakhalekhukhwini wakudala weNokia 5110. I-LCD yalezi zinhlelo ezihamba phambili yeqe iselula futhi inkampani iqhubekile nokuthengisa lo mbukiso ngokuzisebenzisela wona. Isikrini siyi-monochrome futhi siwuhlobo lwe-Lineas LCD. Isibonisi seNokia 5110 sinikela ngemigqa engama-48 namakholomu angama-84. Amandla ayo anika amandla okubuka izithombe, noma kungenjalo kahle. Ukusebenza kwayo kuhle kakhulu yize sizodinga ukusebenzisa ukukhanyisa emuva ukuze sikwazi ukubuka kahle isikrini, ngokujwayelekile kuvame ukuhambisana nalokhu kukhanyisa yize kungahle kube namamojula angenawo lo msebenzi. Isibonisi sisebenzisa umshayeli wePhilips PCD8544. Isikrini seNokia 5110 LCD sitholakala ku- izitolo zama-1,8 euros.
IHitachi HD44780 LCD
Imodyuli IHitachi HD44780 LCD Yisimo esenziwe ngumenzi weHitachi. Iphaneli ye-lcd iyi-monochrome futhi iluhlobo lomugqa. Singathola imodeli enemigqa emi-2 enezinhlamvu eziyi-16 iyinye nenye imodeli enemigqa emi-4 enezinhlamvu ezingama-20 lilinye. Imvamisa sithola isibonisi seHitachi HD44780 LCD kunoma yisiphi isitolo kepha futhi kungenzeka ukuthi sithola isilawuli seHitachi HD44780 ngaphandle kwesikrini, intengo ingasisiza kulesi simo, izindleko Isilawuli sokuhlanganisa isikrini sama-euro angu-1,70 futhi kuphela umshayeli we-0,6 euro.
I-I2C OLED LCD
Lokhu kuboniswa kwe-lcd uhlobo lwe-OLED. I-I2C OLED LCD iyisikrini se-OLED esine-intshi eyodwa yobukhulu besikrini se-OLED esixhuma ku-Arduino ngephrothokholi ye-I2C, le protocol isebenzisa ibhasi lokubhida elenza ukuthi sikwazi ukugcina izikhonkwane, kudingekile izikhonkwane ezine phambi kwalezi ezidingekayo okukhulunywe ngazo ngaphambili. Umshayeli walesi sikrini se-LCD ujwayelekile ukuze sikwazi ukusebenzisa imitapo yolwazi yamahhala ukuyisebenzisa. Intengo yale modeli ayishibhile njengamamodeli wangaphambilini kepha uma ingabiza ngabasebenzisi abaningi, singakwazi thola ama-euro ayi-10 iyunithi.
Isikrini se-E-Ink LCD sisebenzisa inki ye-elektroniki ukukhombisa imininingwane. Njengazo zonke izinhlobo, isebenzisa umthetho olandelwayo we-I2C ukuxhumana no-Arduino. Izikrini ziwuhlobo lwe-TFT kepha zisebenzisa inki ye-elekthronikhi eyenza ukusetshenziswa kwehle kakhulu kepha ngaphandle kokulahlekelwa ukulungiswa. Yize zingekho izikrini zemibala (okwamanje), zonke zingabantu ngesilinganiso esimnyama nesimpunga.
Njengokulangazelela mayelana nale modeli yezikrini ze-LCD, kufanele sisho ukuthi amanani nobukhulu buhlangene. Singakwazi thola osayizi abahlukahlukene futhi usayizi ube mkhulu, isibuko sibiza kakhulu. Ngakho-ke, izikrini ze-E-Ink ezi-1 noma 2,5 intshi Banenani lama-euro angama-25 ngeyunithi ngayinye. Amaphaneli osayizi omkhulu angafika kuma-euro ayi-1.000 ngeyunithi ngayinye.
Ungaxhuma kanjani isikrini se-LCD ku-Arduino?
Ukuxhumana phakathi kwesikrini se-LCD ne-Arduino kulula kakhulu. Ngokomthetho kufanele silandele izikhonkwane ezibalulwe ngenhla bese sizixhuma ebhodini le-Arduino. Umdwebo wokuxhuma ungaba okulandelayo:
Kepha akuyona ukuphela kwento okufanele siyicabangele ukuxhuma isikrini se-LCD ne-Arduino. Yini enye Kufanele sisebenzise umtapo wezincwadi ozosisiza ekunikezeni uhlelo esilwakha ikhodi edingekayo ukuze lusebenze kahle nesikrini. Lesi sitolo sezincwadi ibizwa ngeLiquidCrystal.h futhi ingatholakala mahhala ngokusebenzisa iwebhusayithi esemthethweni ye-Arduino. Lo mtapo wolwazi kufanele usetshenziswe njengeminye imitapo yolwazi, uwunxuse ekuqaleni kwekhodi kanjena:
Indlela elula futhi esheshayo yebhodi le-Arduino lokusebenza nesikrini se-LCD.
Kungakuhle yini ukusebenzisa isikrini se-LCD kuphrojekthi yethu?
Ukuqhubeka nalokhu okungenhla, kufanele sizibuze ukuthi ngabe kulula yini ukuba nesikrini se-LCD ne-Arduino yephrojekthi noma iphrojekthi yethu. Ngokwami, ngicabanga ukuthi kumaphrojekthi athile kuyadingeka futhi kwabanye kuyinto eyimfihlo kakhulu kunesidingo. Isibonelo, singakhuluma ngamamodeli wakamuva wamaphrinta we-3D, amamodeli afaka kuphela kwezinye izimo isibonisi se-LCD futhi akukho okunye, kepha intengo yemodeli ibiza kakhulu.
Kulezi zimo angicabangi ukuthi kudingeka ukuboniswa kwe-LCD, kepha lokhu akunjalo kumaphrojekthi athile lapho ukubonisa kwe-LCD kubaluleke kakhulu. Izibonelo zakamuva amaphrojekthi afana newashi, i-console yomdlalo noma nje isitholi se-GPS. Amaphrojekthi ukuthi ngidinga ukuba nesibonisi sokuqhafaza ukuze sisebenze kahle. Esikushoyo kungahle kube wubuphukuphuku, ikakhulukazi kubasebenzisi abangochwepheshe kakhulu, kepha noma iyiphi into ingenza noma iyiphi iphrojekthi ibize kakhulu futhi yenze ingaphumeleli. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlola ukuthi ngabe iphrojekthi yethu kufanele ibe nesikrini se-LCD noma cha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Izikrini ze-LCD ne-Arduino
Ungayakha kanjani i-home automation igxathu negxathu
Amaphrojekthi ama-3 ane-RGB Led ne-Arduino